ChiGerman, Germany Chikomo Everest neMakomo eNyika - GERMANX
Everest Hill neMakomo muNyika
kholp kugamuchira $
« : Ndira 14, 2008, 01:50:36 am »
Gomo iri dombo rakati kurei rinosvika mazana mashanu emamita kumusoro kwenzvimbo yakatenderedza.
Izwi rine mavambo mururimi rwedu rakavakirwa pazwi rekuti "tai" muchiChinese rakapinza mutauro wedu setaki uye rave kushandiswa nhasi nenguva.
Kune makomo mazhinji munyika uye chikonzero chekumuka kwavo chakasiyana. Mamwe makomo anoumbwa nekudzvanyirirwa kwepasi, nepo mamwe makomo achiumbwa nemabota anobuda achitonhora. Kunobva mabota emakomo ihukuru hunopisa hunodaidzwa kunzi magma.
Haasi makomo ese ari munyika chete. Mamwe mapuraneti anewo makomo. Gomo reEverest, iyo yepamusoro soro mumakomo eHimalaya, iri 8848 metres kumusoro.
Iyo yepamusoro yepamusoro pasirese, iyo Everest Makomo, yakakamurwa kuita mapoka maviri:
Makomo Akareba Zvikuru Pasi Pose
Everest, (Tibetan: Chomolungma), gomo refu-soro pasirese. Inowanikwa muHimalaya, angangoita 28 degrees kuchamhembe kwenharaunda uye 87 madhigirii ekumabvazuva, pamuganhu weChina-Nepal. Southeast yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva, Maodzanyemba nekuMadokero inosvika kumusoro kwavo kuEverest (8.848 m) neSouth peak (8.748 m). Gomo reEverest rinoonekwa zvizere kubva kuTibetan Plateau (anenge zviuru zvishanu) kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva. Nhongonya dzakadai se Çangtse, Khumbutse, Nuptse neLhotse dzichikwira kubva muzvikomo zvinodzivirira kuti dzisaonekwe kubva kuNepal.
Iyo gomo, iro maTibetan raidaidza Çomolungma, zvichireva kuti "Amai Mwarikadzi weNyika" nekuda kwechimiro charo chakanakisa nekukwirira, yaive nzvimbo yepamusoro pasirese, asi yakatemwa nezviyero zvehutongi hweIndia cadastral muna 1852. Iyo yakagamuchirwa kukwirira nhasi i8.848 m ine zvishoma margin yekukanganisa.
Kuumbwa kweGreat Himalayas kwakatanga nekumanikidza mumabhesheni e geological sedimentary anokonzerwa nekubatana kweIndian Subcontinent neTibetan Highlands muDiocene Division (anenge makore 26-27 emakore apfuura). Muzvikamu zvinotevera, manapukeni eKathmandu neKhumbu (akatsemuka uye akapidiguka materu emitsipa) akasvinira kumusoro ndokupeta pamusoro peumwe ndokugadzira gomo rekare. Kukwira kwese kwenzvimbo yepasi kuchamhembe kwakawedzera kukwirira kwenzvimbo. Nekumiswazve manapukeni, nzvimbo yese yakafukidzwa netaundi nyowani uye Mount Everest yakaonekwa muMahabarat Phase yePleistocene Division (makore zviuru zviviri nemazana maviri apfuura). Matombo ematombo akaparadzaniswa nemamwe masimendi-emakristaro kubva kumagumo eCarboniferous Period (anenge makore mazana matatu nemakumi matatu nemakumi masere nemakumi masere akapfuura) uye kutanga kwePermian Period (makore 2,5-345 emamiriyoni apfuura) akaumbwa neiyo synclinal stratification. Iko kuenderera kuwedzera kuri kukonzerwa nekuumbwa uku, kunoenderera nhasi, kunoenzanirana nekukurwa.
Gomo reEverest rinopfuura zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemuchadenga wepasi uye rinosvika kumatunhu ekumusoro uko oxygen iri shoma. Kushaikwa kwe oxygen, mhepo ine simba uye kutonhora kwakanyanya hakubvumire chero mhuka kana chirimwa kuti chigare kumatope ekumusoro. Munguva yemazhizha echando, chando chinopwanyika uye chakaunganidzwa nemhepo. Sezvo aya chando ari pamusoro pemhepo yekupfungaira, mabheseni makuru echando anodyisa echando kazhinji haaumbike. Neichi chikonzero, echando eEverest anongopihwa chikafu neakajairika mabhureki. Kunyangwe iwo materu echando ari pamateru emakomo akapatsanurwa nemipendero mikuru akafukidza iwo mutserendende kumusoro kusvika kumipendero yegomo, iwo anokwezva zvishoma nezvishoma neshanduko yemamiriro ekunze nekufamba kwenguva. Pakati pemwedzi yechando, mhepo dzakasimba dzinobva kuchamhembe kwakadziva kumadokero dzinotsvaira sinou, zvichikonzera kuti iyo peak iite seisina kupfeka.
Mahombe makuru echando paGomo reEverest uye Ama Dablam Mount Everest ndiwo Kangşang Glacier (kumabvazuva), East neWest Rongbuk Glaciers (kuchamhembe nekuchamhembe kwakadziva kumadokero), Pumori Glacier (kuchamhembe kwakadziva kumadokero), Khumbu Glacier (kumadokero nekumaodzanyemba), uye mupata wakavharwa wechando pakati peEverest uye Lhotse-Nuptse ridge ndiyo Western Iceberg.
Mvura inoyerera kubva mugomo inoyerera kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, kuchamhembe uye nzira dzekumabvazuva nematavi anotsauka kubva kune mumwe nemumwe. Iyo Khumbu Glacier inonyungudika uye inobatana neRwizi Lobucya Khola muNepal. Rwizi urwu, runotora zita rekuti Imca Khola, runoyerera kumaodzanyemba uye rwunobatana nerwizi rweDudh Kosi. Rwizi Rong Zhu muChina runokwira kubva kuPumori neRongbuk glaciers pamateru eEverest, Karma Qu Rwizi uye Kangsang Glaciers.
Kwayedza yekukwira Everest yakatanga muna 1920 nekuvhurwa kwemugwagwa weTibet. Chikwata chakatanga kutsigirwa neRoyal Geographical Society uye neMountaineering Club Unified Himalayan Committee yakaguma muna 1953. Musi waMay 29, 1953, Edmund Hillary weNew Zealand uye Tenzing Norgay weNepal vakakwira chikepe cheSoutheast, vachiyambuka nhongonya yeSouth uye vachisvika pakakwirira. Vanokwira vaishandisa yakavhurika uye yakavharwa maseru wedunhu oksijeni, kunyanya akaputira shangu uye mbatya, nemidziyo yeredhiyo yakabata panguva yekukwira uku. Mushure mezuva iri, mazhinji emakomo ekukwira makomo akatsigirwa nenyika dzakasiyana akakwanisa kusvika pamusangano.
Mugomo wekutanga weTurkey kukwira Everest aive Nasuh Mahruki musi waMay 21, 1995. Turk wekutanga kukwira musangano kubva kuNepal aive Tunç Fındık, uyo akakwira musi waMay 23, 2001. Elif Eylem Maviş akazove mukadzi wekutanga weTurkey kukwira Everest musi waMay 15, 2006. Kukwira kumwechete ndiyo yekutanga musangano weEverest nechikwata cheTurkey. Kunyangwe hazvo timu iyi yakaedzawo kuita yekutanga kukwira-isina okisijeni yekukwira mugomo weTurkey, havana kuzadzisa chinangwa ichi. Muna 2007, mukati mezviitiko zveFenerbahçe Sports Club yegumi yemakore zviitiko, Tunç Fındık naMustafa Kalaycı vakakwira Mount Everest pamwechete. Uku kwaive kukwira kwechipiri kweTunç Fındık paEverest.
Ergenekon zita renyika
Iwe wakamira kwemakore mazana mana, uya!
Pfumo redu rakaita mapfumo ane zviuru zvine zana
Re: Gomo reEverest neMakomo ePasi
« Reply #1: Ndira 14, 2008, 01:52:02 am »
Woooooooooowww, kufa Bergen auch noch !! Du bist der Beste! Danke schön!
« Reply #2: Ndira 14, 2008, 02:13:45 am »
« Reply #3: Kubvumbi 19, 2016, 08:19:52 pm »
Ini ndanzwa kuti Everest ndeimwe yenzvimbo dzine njodzi zvakanyanya pasirese. Vanhu vazhinji vakatofa nehupenyu hwavo pano. Asi ndiri kushamisika kuti izvozvi kunyange Everestmusha kune zvitunha zvinopfuura mazana maviri. Zvakakomba, hapana munhu anotora mitumbi iyi uye miviri iyi iri muchando, izvi zviri kuitika zvachose munyika yanhasi. Handina kumbofunga kuti mamiriro akadai aizoitika, ndiri kurevesa, ndakashamisika pandakaziva nezvazvo.